Dhiigni Oromoo Dhanglahaa Jirus Dhiiguma Namaati! – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooDhiigni Oromoo Dhanglahaa Jirus Dhiiguma Namaati!
BaarentuuGadaa Irraa, Muddee 28, 2017
Bittoonni Habashaa Wayyaanee har’aa dabalatee Oromoo weeraranii qabatan yakki isaan Oromoo irratti hin raawwatinii fi hin raawwachiisin hin jiru. Ajjeechaa, hidhaan, dararaa fi biyyaa hariyuun hojii ittiin beekamaniidha. Teewudoroos har’a Habashoonni leellisan gaafa uummata Oromoo wallootti duulee nama nagahaa harkaa miila ciruun yakka sukkanneessaa raawwateera. Ijoollee sabiyyiirraa eegalee jaarsaa jaartii hidhee hallayyaatti darbee fixeera.Gootichi uummanni Oromoo walloo osoo lolee nama yakkamaa kana ofirraa kuffisuu baatee yakkamtichi har’a Habshootaan akka gootaatti faarfamu kun Oromoo Walloo bira darbee yakki inni Oromoo isa haferratti raawwachuuf karoorfate sukanneessaa ture.
Haata’uutii dhiigni Oromoo Habashoota biyya isaa humnaan qabatan biratti akka dhiiga namaatti waan hin ilaalamneef namni yakkamaan Fixiinsa Oromoorraan gaheef silaa abaaramuu ykn balfamuu qabu amma har’aattifarfamaa darbees siidaan ijaaramee fi akka gootaatti dhaadheeffamaa jira. Ilmaan Oromoo isaa fi waraana isaatiin qayee isaanitti haala sukanneessaa ta’een fixamaniif garuu siidaa miti kitaabni seeraan barreeffame hin jiru.dhiigni isaanii dhiiga saree abbaa hin qabnee ta’ee dhangalahee hafe.
Kan isatti aanee dhufe gabroonfatichi Habshaa minilikis haaluma walfakkaatuun Oromoo qayee isaa nagahaan jiraatutti duulee ajjeechaa jumlaa fi sukanneessaa calanqoo fi aanooleetti raawwatulleen amma yeroo dhihoo kanaatti namni maqaa warra cubbuun dhumee kaase hin jiru.
Kan faarfamaa turee fi siidaan isaa shaggar walakkaatti ijaarameef yakkamticha Oromootti duulee ajjeechaa sukaneessaa raawwate Miniliki.
Kan dhume abaaramaa kan ajjeese faarfamaa hara geenye, Minilik goota biyya ijaaruuf duula gaggeesse jedhamaas ture, ittis jiru. Galanni kan ABO fi qeerroo Bilisummaa Oromoo haa ta’u dhiiheenya kana osoo hin jaalatin dirqamanii quubsaa ta’uu baatus mallattoof calanqoo fi aanooleetti siidaa dhaabuu hunduu quba qabna.
Wayyaaneen har’a jirtus waggoota 26 darbaniif haaluma walfakkaatuun ilmaan sabootaa biyyattiirratti addatti ammoo uummata Oromootti duultee iddoo adda addaatti fixxiinsa gaggeessaa turteetti, ajjeechaa raawwattu kana kan nuffan uummanni Oromoo fi saboonni biyyattii yoo gara of ittisuutti cehan ammoo kan ofii jumlaan fixaa fi ficisiisaa turtee fi jirtu dhiiftee yoo nama ishii gufuunulleen dhahe dhaadhessuu, akka nama biyyaaf du’eetti ol kaaftee leellisuu hojii koo jettee akkuma bara Teewuduroos, Minilki, fi Hayilasillaasee itti fuftee jirti. Wayyaanee biratti akkuma sirnoota kaleessaa dhiigni Oromoo dhiiga gatii hin qabne, Dhiiga Saree abbaa hin qabnee ihii karaarratti duuteetti.
Eeyyee Wayyaaneen erga aangoo humnaa fi shiraan qabattee kaaftee yakki Oromoorratti raawwachaa turtee fi jirtu yakka suukanneessadha. Yakki ishii yakkoota baroota sirnoota ishii dura turanii ol malee gadii miti.Wayyaaneen yakka ofii ishiitii Aga’aazii bobbaaftee uummata Oromoo irratti raawwachaa jirtuun alatti erga Liyyuu Hayilii jechuudhaan saboota ollaa Oromoo jirankeessaa ergamtootaa fi garaaf bultoota Oromoo irratti ijaartee, hidhachiiftee bobbaasuu eegaltee asii yakki Oromoo irratti raawwatamaa jiru sukanneessa dha.
Guyyumaan dhiigni Oromoo dhangalahaa oola.
Wayyaaneen murnoota hidhachiiftee bobbaafte kanaan yoo dhigni Oromoo asii fi achitti seera malee dhangalahu, ajjeechaan jumulaa raawwatu tokkaa sirri miti jettee hin beektu. Warri ajjeechaa kana raawwatanis seeratti dhihaatanii hin beekan, Inumaawuu koomishiin mirga namoomaa ishii ajjeechaan Oromoorratti gaggeeffame madaalawaadha jedhee paarlaamaa fakkeessii ishiirratti dhiheessuu isaa kan hundumtuu yaadatuudha.
Kan muldhachaa turee fi jiru inumaawuu Oromoon yoo xiqqoo sochii of ittisuu taasise waraana ishii isa idilee isa silaa daangaa eguun isaa malu bobbaaftee akka inni gara yakkamtoota Oromoo irratti yakka hojjetanii kanaa goree Oromoo ajjeesuudha. Qayee fi qabeenyarraa buqqisuudha, duuala liyyuu hayilii sumaalee irrattis kan muldhate dhugaadhuma kana.
Haacaaluu ammoo Wayyaaneenibsaa fi holola karaa midiyaalee ishii gaggeesaa turtee fi jirtuunis Oromoo dhuumaa jiru dhiiftee yoo warra isa miidhuuf tumsituudha. Ee wayyaanee biratti akkuma bittoota kaleessaa dhiigni Oromoo dhiiga namaatii miti. Kanarraa ka’uun Oromoon kumnis dhumu, kitillis wareegamu dantaa ishiitii miti. Ibsi Muummee ministeeroota Hayilmaariyaam dassaalanyirraa Mudde 17 bara 2017 kennames kanuma dhugoomsa.
Ergamtichi Wayyaanee maqaaf muumee ministeerootaatti Impaayeera Itiyoophiyaa jedhamu mudde 17 bara 2017 galagala karaa TV Etiyoophiyaa(EBC) gadi bahee akka xibaareetti ajjeechaa jumulaa iddoo akkasii fi akkanaatti saba Sumaalee irratti Oromiyaa Harargee lixaa…………raawwate cimseen balaaleffadha jedheera. Akka Oromoon ajjeechaa jumulaa saba sumaaleerratti raawwataa jiruuttis nama qabsiisuuf yaalee jira. Ergamtichi maqaaf muumee ministeerootaa jedhamu kun ajjeechaa raawwate balaaleeffachuun isaa yakka ta’uu baachuu mala, garuu ajjeechaan kan raawwachuu eegale har’aa miti.
Uummanni Oromoo waraana qondaaloonni Wayyaanee leenjisanii bobbaasan liyyuu hayilii sumaaleetiin akkasumas waraanuma sirnichi daangaa eega jedhuun erga dhumuu eegalee oolee bubbuleera.Hundumaa dhiifnee ajjeechaa baha harargee calaqootti, kibba bahaa baaleetti, kibba Oromiyaa Booranatti uummata Oromoo irratti liyyuu hayilii sumaalee fi waraana sirnichaan raawwate yoo ilaalle akkaan suukanneessoodha. Egaa gaafiin asirratti ka’u har’a maaltu dhalannaan hayilamaariyaam dallanee ka’ee Oromoorratti ibsa kenne..? dhuguma warra ajjeefamaniif gaddeetii? Yoo dhuguma nama du’aa jiruuf gadda ta’e maaf yoo Oromoon kumni dhibba 6 ol qayee fi qabeenyarraa buqqifamu, maaf yoo Oromoon dhibbootaan ajjeefamu callise.? Dubbiin bakka kana jirti, eeyyee bittoota Habashaa kaleessaafis ta’e Wayyaanee har’aatif dhiigni Oromoo dhiiga namaatii miti. Oromoon du’ee dhisee isaanif dantaa miti.
Kanaaf gaafa Oromoon dhumu gooftooliin isaa Wayyaanoonni aka gadi bahee dubbatu hin heyyaminiif!
Eeyyee Dhiiga Oromoo bittootaaf dhiiganama biraa waliin wal qixa miti. Duuti, dararamni Oromoo qayee fi qabeenyarraa buqqa’uun Oromoo isaaniif jireenya waan ta’eef ni callisu. ittuu akka babbaltu taasisu. Dhugaan har’a Itiyoophiyaan keessumeessaa jirtus kanuma.Oromoo fi jaalattoonni bilisummaa isaas dhugaa kana akka gaaritti hubachuu qabu.Hubachuu qofas osoo hin taane yakki, logdummaan ifaa bahaan kun akka Oromoorraa dhaabbatu ciminaan hojjechuu qabu. Sirni dhiiga Oromoo dhangalaasee Oromoo irratti qoosu kun akka xumura argatuuf qabsoo roga maraa, FXG eegalame hunduu bakka jirutti cimsee itti fuufuun dirqama lammuutti jenna.Fallii fi malli jirus kanuma waan ta’eef.